Mpanamboatra sy mpamatsy tsipika famokarana China Syringe | IVEN
1. Masinina fanoratana tsindrona
2. Masinina fanontana tsipika
3. Milina fanangonana
4. Masinina fonosana syringe ho an'ny tsirairay: fonosana kitapo PE / fonosana blister
5. fonosana faharoa & CARTONNING
6. sterilizer EO
Ny fizotry ny famokarana syringes iray dia misy dingana lehibe 6:
1. Famolavolana tsindrona barila
4. fonosana syringe ho an'ny tsirairay:
2. Fanontana tsipika ny barika
Misy tombony lehibe 4S zaraina aminao momba ny masininay.
1.Safety. Ny masininay dia feno fonosana miaro, rehefa mandeha ny masinina, mikatona ny fonony, rehefa misokatra ny fonony dia hijanona tsy mandeha intsony ilay masinina, izay manakana ny mpiasa tsy haratra ary koa tsy hisy loto mandoto handoto ny syringe eo am-panaovana azy.
2. Mihazakazaka mihazakazaka.Raha mikasa ny hampandeha ilay masinina mandritra ny adiny 8 fotsiny ianao amin'ny voalohany, saingy mahazo baiko maro dia maro, ka mikasa ny hitantana izany 16 na 24 ora isan'andro ianao. Ahoana no ahafahanao manao izany raha tsy misy milina tsara? Ho an'ny masininay, tsy mila miahiahy momba izany mihitsy ianao. Ny milina ataontsika dia afaka mihazakazaka maharitra 24 ora isan'andro. Azonao atao ny manova ny famokarana mifanaraka amin'ny fangatahanao. Raha taty aoriana na dia mihazakazaka azy 24 ora aza ianao dia tsy ampy amin'ny fangatahanao, mahatonga anao hahazo baiko bebe kokoa hatrany, tongasoa eto aminay ny andalana faharoa na ny andalana fahatelo.
3.Vonjeo ny asa.Mitsitsia ny sandan'ny mpiasa. Izy io dia voafehin'ny PLC tanteraka. Ny milina dia mifandray. Tsy misaraka. Izy io dia afaka manao pirinty, mivory amin'ny tsipika mifandray iray. Tsy mila asa mafy hanaovana ny famindrana rehefa vita ny fanontana. Vokatra fanontam-pirinty vita dia hovaina ho lasa milina automatique.
4.Saveta fitaovana.Ny masininay dia manana taha ambony. Mihoatra ny 99,9% izany. Saika tsy hisy fako ho anao. Vokatra mahay kokoa, tombony bebe kokoa.
Syringe Scale Line Print Machine & Assembling Machine
Previous: Zavamaniry turnkey fantsom-panafody
Manaraka: Efitra Madio